ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးပါရန် - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ရေးသားသူလှိုင်ကျော်ထွေး on ဇွန် 17, 2011 at 12:09pm in ဆွေးနွေးခြင်း
ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံတွေ(သို့)သာသနရိပ်သာတွေမှာ လူတို့၏ လောကီအမှု(မဂ်လာဆောင်)အခမ်းအနားကျင်းပခြင်းသည် သင့်တော်မှုရှိမရှိ(သို့)အပြစ်သင့်မသင့် သိလိုပါ၏...။ဘုရားရှင်လက်ထက် အခါကရော ရှိခဲ့ဘူးလား.......။ လေးစားစွာဖြင့်...
Permalink Nyi Nyi Naing သည် ဒီဇင်ဘာ 2, 2011 1:15pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
မသင်.တော်ဘူးလို.ထင်ပါတယ်။အပြစ်ဖြစ်မဖြစ်က ၀ိနည်းနားလည်တဲ.ဆရာတော်ကြီးတွေကိုလျှောက်ထားရင် သင်.တော်မယ်ထင်ပါတယ်။ အလှူငွေ လိုအပ်လို. နည်းလမ်းတစ်ရပ်အနေနဲ.ရှာတယ်ဆိုရင်တောင် သပ်သပ်တစ်နေရာမှာ အဆောက်အဦးဆောက်ပြီးရှာသင်.ပါတယ်။အထူးသဖြင်းဓမ္မာရုံတွေဆိုတာ
ကိလေသာနည်းကြောင်း ဘုရားရှင်ရဲ.တရားတော်များ သင်ကြားပို.ချ နာယူရာနေရာများသာဖြစ်သင်.ကြောင်းပါခင်ဗျာ။ရဟန်းတော်များရဲ.အမြင်ကိုလည်းဖတ်ချင်ပါတယ်ဘုရား။
Permalink စောအဲ့ကော်ဂါ သည် ဒီဇင်ဘာ 2, 2011 6:32pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း ညီညီနိုင် ဆွေးနွေးချက်ကို ထောက်ခံပါတယ်..
Permalink htaynaing သည် ဒီဇင်ဘာ 3, 2011 11:49amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
သီချင်းသံ တွေနဲ့ ဆူညံပွက်လောနေတာကတော့ တ၇ားစခန်းတွေနဲ့မသင့်တော်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ ရှင်ဲပြု၇ဟန်းခံ ကထိန်စတဲ့ အလှူပွဲတွေမှာလည်း သီဆိုတီးမှုတ်မှုတွေရှိတာဘဲ နစ္စ၊ ဂီတ စတာတွေနဲ့စဉ်းစားရင်တော့ မသင့်တော်ဘူးလို့အဖြေထွက်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ အပြု အမူကိုတင်မကြည့်ဘဲ ၇င်ထဲကစေတနာကိုကြည့်၇အောင် ထိုကဲ့သိုသီ ဆို တီးမှုတ်မှုသည်မသင့်တော်သော်လည်း တခါတရံမျှသာဖြစ်ခြင်း၊၊ ၇န်ကုန်မြို့လို ခန်းမ၊စ၇ိတ်စက နေ၇ာအခက်အခဲရှိတဲ့နေ၇ာမျိုးမှာ မိမိတို့ကို မှီခိုအားထား ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဒကာ၊ဒကာမတွေ၇ဲ့ အခက်အခဲကိုကူညီဖြေ၇ှင်းပေးတာဆို၇င်တော့ နားလည်ခွင့်ပြုပေးသင့်ပါတယ်လိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
Permalink ဟန်လေး သည် ဒီဇင်ဘာ 3, 2011 9:30pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ကျွန်တော့်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ ဓမ္မာရုံတွေမှာတော့ မပြောလိုပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ဓမ္မာရုံတွေမှာက ရဟန်းသံဃာကအမြဲတမ်းမနေဘူးဆိုတော့မပြောလိုပါဘူး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာတော့လုံးဝကို မသင့်တော်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်ဆိုတော့ ရဟန်းသံဃာတွေကို လောကီအာရုံ ကာမဂုဏ်တွေနေရာမှာ ဘုရားရှင်ကသေချာကိုပညတ်ချက်တွေချထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာမျိုးကလည်း ရဟန်းသံဃာတွေနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုနေရာမျိုးနဲ့ ဘယ်လိုမှမအပ်စပ်တဲ့ အပြုအမှုတွေလို့ပဲထင်တယ်လေ။(ကျတော့အမြင်ကိုပြောတာပါ) ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတာတော့ တစ်ချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာဆို မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပတာ
များ အသံချဲ့စက်ကြီးတွေ ဆူဆူညံညံနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ကို ချိန့်ချိန့်သဲကျင်းပကြတာများ ကြားလို့တောင်မကောင်းအောင်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကသာ ကျွန်တော်တို့ဗဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းမို့ အပြစ်မြင်တဲ့သူသိပ်မရှိတာဗျ။ တခြားဘာသာခြားတွေအမြင်မှာတော့ တော်တော်အရှုပ်ဆိုးအကြည်းတန်တယ်လို့ပဲ
u9.jpg, 4.4 MB
Permalink Nyi Nyi Naing သည် ဒီဇင်ဘာ 3, 2011 9:51pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပွင့်လာမှုကြောင့် ဉာဏ်စက္ခုလည်းရကြသည်၊
ဉာဏ်စက္ခုတွေ သာ၍ လင်းဖို့၊ သန့်ရှင်းတိတ်ဆိတ် ရှိသင့်သည်။
ပွက်လောဆူညံ လူသံပွဲတို့ ကျောင်းဘုရားထဲ လုပ်ကြသည်။
ဗုဒ္ဓအယူ အတွင်းလူဖျက်လို့ ဘာသာပျက်၍ ခက်လိမ့်မည်။ (အရှင်ဇနကာဘိဝံသ) ဆရာတော်ကြီးလိုပါပဲ ကျွန်တော်.သဘောထားကလဲ
ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ သက်ရှိထင်ရှားဘုရားရှင်သီတင်းသုံးနေသကဲ.သို. သဘောထားပါတယ်။ဘုရားဆင်းထုတော်တွေပဲရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်.ဘုရားရှင်ကဲ.သို.ရိုသေမြတ်နိုးကြရပါမယ်။ဘုရားရှေ.ထားပြီး ဘုရားမကြိုက်တာတွေလုပ်နေရင် ဘုရားလက်ထက်က ဘုရားရှင်
အဂ္ဂသာဝကကြီး ၂ပါးရဲ.တပည်.တွေကို ဘယ်လိုမိန်.ခဲ.ပါသလဲပြန်စဉ်းစားကြည်.ကြပါ။သာသနာနှင်းပါက်သက်လာရင် ဘုရားရှင်မျက်နှာ
ကိုပဲကြည်.ရပါမယ်။ဘယ်သူကဲ.ရဲ. ကဲ.ရဲ. ဘုရားမကဲ.ရဲ.အောင်နေသင်.လှပါတယ်။
Permalink Mg Zin Myo Aung သည် ဒီဇင်ဘာ 4, 2011 4:25pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
Permalink လှိုင်ကျော်ထွေး သည် ဒီဇင်ဘာ 8, 2011 8:39pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ...အခုလို ပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏
Permalink 1y31nso5x7bsz သည် ဒီဇင်ဘာ 12, 2011 6:26pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
Permalink ကျော်ကို သည် ဒီဇင်ဘာ 14, 2011 9:45pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံတွေ(သို့)သာသနရိပ်သာတွေဟာ ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ ယုတ်ညံ့သောအကျင့် ကိုပယ်ခွာပြီးဘုရားရဲ့ အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာဖို့ စတက်လှမ်းနေကြသူတွေရဲ့ ပထမအဆင့် လှေကားထစ် ၊ နားခိုရာနေရာတွေဖြစ်လို့ ပုထုဇဉ်တို့ ရဲ့ အကျင့် (မင်္ဂလာဆောင်)တွေကိုဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံတွေ(သို့)သာသနရိပ်သာတွေမှာ ပြုလုပ်တာဟာ ဘုရားကိုအရွဲ့ တိုက်နေသလိုပါပဲ..သင့် တော်နိုင်ပါ့ မလားခင်ဗျာ..။ကျနော် ဥာဏ်မှီသလောက်စဉ်းစားပြီးဖြေကြည့် တာပါ အကို..။
Permalink 0543h5uo23fua သည် ဇန်န၀ါရီ 6, 2012 6:00pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
သာကေတမြို့နယ် မိုးကုတ်ရိပ်သာက ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ *ကိလေသာမီးငြှိမ်းတဲ့နေရာကို လာပြီးကိလေသာမီးမွှေးတဲ့အလုပ် လာလုပ်တာတော့ လက်ကိုမခံဘူးလို့* ရိပ်သာဝင်သူများကို ဆုံးမတော်မူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ သာသနရိပ်သာတို့ဆိုတာ ကိလေသာ အားနည်းအောင် ကျင့်ကြံကျိုးကုတ်အားထုတ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် (မင်္ဂလာဆောင်) အခမ်းအနားကျင်းပတာဟာ ဖြစ်ကို မဖြစ်သင့်ပါဘူးရှင်။
Permalink လှိုင်ကျော်ထွေး သည် ဇန်န၀ါရီ 6, 2012 6:35pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
အခုလို ပါဝင်ဆွေးနွေးတာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ..။
Permalink ကိုကျော်သန်း သည် သြဂုတ် 28, 2013 10:22pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။